စာကြမ်းပိုးယောင်းယောင်းလေးတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ မဖြစ်မနေ ရှိထားသင့်တဲ့ Application (၃) ခု - For her Myanmar
စာကြမ်းပိုးယောင်းယောင်းလေးတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ မဖြစ်မနေ ရှိထားသင့်တဲ့ Application (၃) ခု
မြန်မာလိုပဲ ဖတ်လို့ရမှာနော် 😉
စာဖတ်တာက ဝါသနာပါတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် စာအုပ်လေး ထုတ်ဖတ်ချင်၊ ဒါပေမဲ့လည်း သယ်ရပြုရ အဆင်မပြေတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနေရပါသလား? အလဲ့ အဇမ်းတွေများ ကြော်ငြာဆန်သွားလား 😛 ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံနေရတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ဒီ App လေး သုံးခုကို ထည့်သွင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုပဲ ရောက်ရောက်၊ ဘယ်စာအုပ်ပဲဖတ်ချင်ချင် အလွယ်တကူဖတ်လို့ရနိုင်မှာပါနော်… ဖုန်းနဲ့ စာမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ ယောင်းတို့ကလွဲပြီး တခြား စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ ယောင်းလေးတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် App လေးတွေကတော့…
ဝန်ဇင်း App လေး စ ပေါ်ကာစက သုံးရတာ အဆင်မပြေတာလေး နည်းနည်းရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ သုံးရတာ တော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ။ ဖုန်းဘေလ်ထဲကနေ သုံးစွဲခ ကောက်ခံသလို၊ ဝယ်ပြီး ဒေါင်းလုတ် ဆွဲဖတ်ဖို့ စာအုပ်အမျိုးအစားကလည်း တော်တော်စုံနေပြီလေ။ ဝယ်မဖတ်ချင်ဘူးဆိုလည်း ရသေးတယ်နော်။ ငွေတစ်ရာလောက် နဲ့ ငှားဖတ်လို့ ရတဲ့ စာအုပ်တွေအပြင်Free ဖတ်လို့ ရတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ ဝန်ဇင်းမှာ ရှိပါသေးတယ်။
ဝန်ဇင်း App ကိုတော့ IOS နဲ့ Android နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ ရပါတယ်နော်…
Related Article >>> ယောင်းမသိသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄) ခု
၂။ MPT Book
ဒါကလည်း MPT ကနေ စတာမကြာသေးတဲ့ App တစ်ခုပါ။ သူကလည်း ဝန်ဇင်းလိုပဲ စာအုပ်တွေကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို Free ဖတ်လို့ရတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ပါပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ ဝန်ဆောင်မှုကျသင့်ငွေတွေကို MPT ဖုန်းဘေလ်ကနေပဲ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ တခြား Operator သုံးစွဲသူတွေအတွက်လည်း ကြိုးစားစီစဉ်နေပါတယ်တဲ့။ လက်ရှိမှာ MPT Books ကို Android ဖုန်းတွေပဲ သုံးလို့ရသေးပေမဲ့ IOS တွေအတွက်လည်း စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အက်ဒ်မင့်လို ဘယ်လောက် အသက်ကြီးလာလာ ကာတွန်းလေးတွေ ချစ်တတ်တဲ့ ယောင်းတို့ဆိုရင်တော့ ပုတက် လေးကို သဘောကျမှာပါ။ ကလေးဘဝကတည်းက နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းလက်ရာစုံအပြင် ကာတွန်းလက်ရာအသစ်တွေကိုလည်း ဖတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အရင်ကလို မန်ဘာကြေးပေးပြီး စာအုပ်တွေ ဖတ်လို့ရသလို ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြော်ငြာတွေ ကြည့်ပေးရုံနဲ့ အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
ပုတက် App ကတော့ လောလောဆယ် Android တွေ အတွက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
App တွေကနေ ဝယ်ဖတ်တာက စာအုပ်ဝယ်တာထက် ဈေးသက်သာတာမို့ စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ချင်ပေမဲ့ စာအုပ်ဖိုး သိပ်မတတ်နိုင်တာ၊ စာအုပ်တွေ ထားဖို့ နေရာမရှိတာ၊ သွားလေရာ မသယ်နိုင်တာစတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံနေရတဲ့ စာချစ်သူယောင်းလေးတို့အတွက် ဒီ App လေး တွေ က အဆင်ပြေစေမှာပါ။
Play Store မှာ စာအုပ်တွေ Free ဖတ်လို့ရတဲ့ တခြား App တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ App လေးတွေမှာတော့ ဝန်ဆောင်ခပေးပြီး ဖတ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာရေးဆရာတွေလည်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိနေတာမို့ အက်ဒ်မင်တို့ ယောင်းတို့ ချစ်တဲ့ စာရေးဆရာတွေ အနုပညာလက်ရာကောင်းများစွာ ဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ စာအုပ်ဝယ်ဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီလို ဝန်ဆောင်ခပေးရတဲ့ App တွေနဲ့ ဖတ်ရှုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားပေးကြပါလို့ အကြံပြုရင်း ……..
မွနျမာလိုပဲ ဖတျလို့ရမှာနျော 😉
စာဖတျတာက ဝါသနာပါတော့ ဘယျနရောရောကျရောကျ စာအုပျလေး ထုတျဖတျခငျြ၊ ဒါပမေဲ့လညျး သယျရပွုရ အဆငျမပွတေဲ့ အဖွဈမြိုးတှေ ကွုံနရေပါသလား? အလဲ့ အဇမျးတှမြေား ကွျောငွာဆနျသှားလား 😛 ဒီလိုအဖွဈမြိုး ကွုံနရေတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ ကိုယျ့ဖုနျးထဲမှာ ဒီ App လေး သုံးခုကို ထညျ့သှငျးထားလိုကျမယျဆိုရငျ ဘယျကိုပဲ ရောကျရောကျ၊ ဘယျစာအုပျပဲဖတျခငျြခငျြ အလှယျတကူဖတျလို့ရနိုငျမှာပါနျော… ဖုနျးနဲ့ စာမဖတျတတျဘူးဆိုတဲ့ ယောငျးတို့ကလှဲပွီး တခွား စာဖတျဝါသနာပါတဲ့ ယောငျးလေးတှအေတှကျ အဆငျပွနေိုငျမယျ့ App လေးတှကေတော့…
ဝနျဇငျး App လေး စ ပျေါကာစက သုံးရတာ အဆငျမပွတောလေး နညျးနညျးရှိခဲ့ပမေဲ့ အခုတော့ သုံးရတာ တျောတျောကောငျးသှားပါပွီ။ ဖုနျးဘလျေထဲကနေ သုံးစှဲခ ကောကျခံသလို၊ ဝယျပွီး ဒေါငျးလုတျ ဆှဲဖတျဖို့ စာအုပျအမြိုးအစားကလညျး တျောတျောစုံနပွေီလေ။ ဝယျမဖတျခငျြဘူးဆိုလညျး ရသေးတယျနျော။ ငှတေဈရာလောကျ နဲ့ ငှားဖတျလို့ ရတဲ့ စာအုပျတှအေပွငျFree ဖတျလို့ ရတဲ့ စာအုပျလေးတှပေါ ဝနျဇငျးမှာ ရှိပါသေးတယျ။
ဝနျဇငျး App ကိုတော့ IOS နဲ့ Android နှဈမြိုးလုံးသုံးလို့ ရပါတယျနျော…
Related Article >>> ယောငျးမသိသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ (၄) ခု
ဒါကလညျး MPT ကနေ စတာမကွာသေးတဲ့ App တဈခုပါ။ သူကလညျး ဝနျဇငျးလိုပဲ စာအုပျတှကေို ဝယျယူခွငျး၊ ငှားရမျးခွငျးတှေ ပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈသလို Free ဖတျလို့ရတဲ့ စာအုပျတှလေညျး ပါပါတယျ။
လောလောဆယျမှာတော့ ဝနျဆောငျမှုကသြငျ့ငှတှေကေို MPT ဖုနျးဘလျေကနပေဲ သုံးလို့ရပါသေးတယျ။ တခွား Operator သုံးစှဲသူတှအေတှကျလညျး ကွိုးစားစီစဉျနပေါတယျတဲ့။ လကျရှိမှာ MPT Books ကို Android ဖုနျးတှပေဲ သုံးလို့ရသေးပမေဲ့ IOS တှအေတှကျလညျး စီစဉျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
အကျဒျမငျ့လို ဘယျလောကျ အသကျကွီးလာလာ ကာတှနျးလေးတှေ ခဈြတတျတဲ့ ယောငျးတို့ဆိုရငျတော့ ပုတကျ လေးကို သဘောကမြှာပါ။ ကလေးဘဝကတညျးက နှဈသကျခဲ့တဲ့ ကာတှနျးလကျရာစုံအပွငျ ကာတှနျးလကျရာအသဈတှကေိုလညျး ဖတျလို့ရနိုငျပါတယျ။ အရငျကလို မနျဘာကွေးပေးပွီး စာအုပျတှေ ဖတျလို့ရသလို ခုနောကျပိုငျးမှာတော့ ကွျောငွာတှေ ကွညျ့ပေးရုံနဲ့ အခမဲ့ ဖတျရှုနိုငျပွီလို့လညျး သိရပါတယျ။
ပုတကျ App ကတော့ လောလောဆယျ Android တှေ အတှကျပဲ ရှိပါသေးတယျ။
App တှကေနေ ဝယျဖတျတာက စာအုပျဝယျတာထကျ ဈေးသကျသာတာမို့ စာအုပျဝယျဖတျခငျြပမေဲ့ စာအုပျဖိုး သိပျမတတျနိုငျတာ၊ စာအုပျတှေ ထားဖို့ နရောမရှိတာ၊ သှားလရော မသယျနိုငျတာစတဲ့ အခကျအခဲတှေ ကွုံနရေတဲ့ စာခဈြသူယောငျးလေးတို့အတှကျ ဒီ App လေး တှေ က အဆငျပွစေမှောပါ။
Play Store မှာ စာအုပျတှေ Free ဖတျလို့ရတဲ့ တခွား App တှရှေိနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီ App လေးတှမှောတော့ ဝနျဆောငျခပေးပွီး ဖတျရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ စာရေးဆရာတှလေညျး အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိနတောမို့ အကျဒျမငျတို့ ယောငျးတို့ ခဈြတဲ့ စာရေးဆရာတှေ အနုပညာလကျရာကောငျးမြားစှာ ဆကျလကျဖနျတီးနိုငျဖို့ စာအုပျဝယျဖတျတာဖွဈဖွဈ၊ ဒီလို ဝနျဆောငျခပေးရတဲ့ App တှနေဲ့ ဖတျရှုတာပဲ ဖွဈဖွဈ အားပေးကွပါလို့ အကွံပွုရငျး ……..
Tags: Apps, Books, bookworm, Mobile Bookshelf, technology
Sugar Cane December 24, 2018
Wathun March 4, 2019